Maraykanka, 01 September 2018
Sabti 1 September 2018
Mareykanka oo Gacanka Cadan Ku Qabtay Doon Hub Sidday
Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegey inay ku qabteen oo ay ka hortageen hub gacanta Cadan, xilli ay dagaallo ka socdaan dalka Yemen.
Faa'idada Heshiiska Ganacsi ee Mareykanka iyo Mexico
Donald Trump iyo Enrique Pena Nieto ayaa isku raacay heshiis uu madaxweynaha Maraykanku u bixiyey heshiiska ganacsi ee Maraykanka iyo Mexico, iyada oo Madaxweyne Trump uu sheegay in heshiiskii NAFTA ee dalka Canada uu qeybta ka ahaa uu yahay mid dhintay
Trump oo Ku Hanjabay Dib-u-billaabidda Dhoolatusyadii Militari ee K.Kuuriya
Madaxweynaa Mareykanka Donald Trump ayaa sheegey in Mareykanka uu waqti walba billaabi karo dhoolatus millatari oo uu la sameeyo dalalka Kuuriyada Koofureed iyo Jabbaan, haddii barnaamijka burburinta hubka niyukleerka Kuuriyada Waqooyi aanan horumar laga gaarin.
Washington: Suuqyo ay Soomaalida ku Ganacsato oo La Xirayo
Magaalda Seattle oo ka tirsan gobolka Washington ayaa labo degmo oo ku yaalla, kuwaas oo lagu kala magacaabo, Tukwila iyo Seatac ay wadaan qarshe lagu xirayo labo suuq ay Soomaalidu ku ganacsato.
Africom: Waxaan Duqeyn ku Dilney Maleeshiyaad Shabaab Ah
Dawladda Maraykanka ayaa sheegtay in duqayn cusub oo ay ka gaysatay Soomaaliya lagu dilay saddex ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabab.
Washington: Trump iyo Kenyatta oo Kulmay
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii shalay ku soo dhaweeyay Aqalka Cad Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Madaxweynayaal Hore oo ka Qeyb Gali Doona Aaska McCain
Siyaasiyiin Maraykan ah oo isugu jira kuwa xilal hore soo qabtay iyo kuwa haatan xilal haya oo ka soo kala jeeda dhammaan garabyada siyaasadda ee Maraykanka ayaa lagu wadaa in Sabtida ay ka soo qayb-galaan munaasabad loogu baroor-diiqayo Senator John McCain oo Sabtidii geeriyooday.
Qof Soomaali ah oo Lagu Diley Columbus, Ohio
Is-rasaaseyn ka dhacdey xaley magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa la sheegayaa in hal qof oo Soomaali uu ku dhintey mid kalena uu dhaawac culus soo gaarey, sida ay sheegeen madaxda jaaliyadda. Booliiska ayaan illaa iyo hadda sheegin waxa keeney is-rasaaseyntaas.
Senator John McCain oo Geeriyooday
John McCain oo ka tirsanaa xisbiga Jamhuuriga waxaa uu hore usoo ahaa duuliye diyaaradadaha dagaalka Maraykanka waxaana sannadkii 1967 lagu soo riday dalka Vietnam isagoo maxbuus ahaan loo haystay lix sano.
Kuuriyada Koofureed oo riixeysa Wadahadalka Mareykanka iyo K.Waqooyi
Kuuriyada Koofureed ayaa nasiibdarro ku tilmaantay go’aanki uu madaxweyne Trump ku baajiyay safar uu xogahayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ku tagi lahaa Kuuriyada Waqooyi.
Duufaanta Lane oo Saameysay Gobolka Hawaii
Khubarrada saadaasha hawada Mareykanka ayaa sheegay in ay hoos u dhacday xowligi ay marki hore ku socotay duufaanta Lane ee garaaceysa qeybo ka mid ah xeebaha gobolka Hawaii ee dalkaan Mareykanka.
Yamamoto: Xal Ciidan laguma Xallin Karo Dhibaatada Soomaaliya
Donald Yamamoto, safiirka uu madaxweyne Trump u magacaabay Soomaaliya, ayaa Washington ka sheegay in xal ciidan aan lagu xallin karin dhibaatada dhinaca amniga ee ka taagan Soomaaliya.